စာမေးပွဲဖြေဆိုနေချိန် မေးခွန်းများကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သည့် အကောင့်ပိုင်ရှင်အား ပုဒ်?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၃ ၊ စာမေးပွဲဖြေ ဆိုမှုအချိန်မစေ့မီ မေးခွန်းများကို လူမှုကွန်ရက်တွင်တင်ခဲ့သည့် Sayar Bone အကောင့်ပိုင်ရှင်အား ဆက် သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ- ၆၆(ဃ)ဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးမှ အမှုဖွင့်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲ သင်္ချာဘာသာရပ် ဖြေဆိုသည့်နေ့(မတ် ၉ ရက်)နံနက် ၁၀ နာရီခွဲနှင့် မတ် ၁၂ ရက် တွင် ကျင်းပသော ဓာတုဗေဒဘာသာ ရပ်ဖြေဆိုသည့်နေ့များတွင် လူမှု ကွန်ရက်အသုံးပြုသူ Sayar Bone အကောင့်ပိုင်ရှင်သည် မေးခွန်းများ ကို စာမေးပွဲအချိန် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမတိုင်မီအချိန်က လူမှုကွန် ရက်တွင် တင်ခဲ့သည့်အတွက်
ဆက် သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုခုကို အသုံး ပြုပြီး ပညာရေးဌာန၏ဂုဏ်သိက္ခာကျ ဆင်းစေရန် အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းကြောင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးမှ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ- ၆၆(ဃ)ဖြင့် အရေးယူပေးရန် မတ် ၁၂ ရက်က အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှု ဖွင့်ခဲ့ကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
“အကောင့်ပိုင်ရှင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲတော့ မသိရသေးဘူး။ ဒါက ရဲစခန်းကဆက်လက်စုံစမ်း ပါလိမ့်မယ်။ မနေ့ကမေးခွန်းတွေ ကိုတင်ထားတာ တွေ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်လူကြီးကို တင်ပြတယ်။ တင်ပြတော့ မနေ့ကပဲ ရဲစခန်းမှာ သွားပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့တာပါ”ဟု ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးသီဟထွန်းက မတ် ၁၃ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ မေးခွန်းများကို သတ်မှတ်အချိန် ဖြစ်သည့် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမတိုင် မီ အချိန်အထိ မည်သူမှပြင်ပသို့ယူ ဆောင်ခြင်း၊ ပြသခြင်းကိုပြုလုပ် ခွင့်မရှိကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ကန့် သတ်ထားသော်လည်း အဆိုပါအ ကောင့်ပိုင်ရှင်သည် စာမေးပွဲဖြေ ဆိုချိန်မစေ့မီတွင် မေးခွန်းများကို လူမှုကွန်ရက်တွင်တင်ခဲ့သည့်အ တွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေး ပွဲမေးခွန်းများပေါက်ကြားသည်ဟု အများပြည်သူမှ ထင်ယောင်ထင် မှားဖြစ်နေသည့်အတွက် အမှုဖွင့် လိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးအမှတ်(၂) နယ်မြေရဲစ ခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက “မနေ့ က ဓာတုဗေဒစာမေးပွဲမေးခွန်း လွှာကို ဖြေဆိုနေချိန်တွင်းမှာ တင် ခဲ့လို့ ၆၆(ဃ)နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာ။ လောလောဆယ် တရားခံဖမ်းဆီး ဖို့အတွက် ဒီ Page နဲ့ပတ်သက် ပြီး လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်။ နေ ပြည်တော်က နည်းပညာကျွမ်းကျင် တဲ့ မှုခင်းကိုပေးပို့ပြီးတော့ စစ် ဆေးရမယ်။ ဒီ Page ကို ဘယ်သူ ထောင်တာလဲ။ ဒီ Page နဲ့ ပတ် သက်ပြီးတော့ ဘယ်သူအသုံးပြု နေတာလဲဆိုတာ ဖုန်းသိမ်းလို့ရမှ စစ်ဆေးလို့ရမယ်။ ဒီ Page ကို ဘယ်သူကိုင်တွယ်တာလဲ။ ဘယ်သူ Admin လဲပေါ့။ အဲဒီလိုရှာပြီးမှ သိရမယ်။ လက်ရှိမှာ တရားခံကို လိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲပါ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၁၃ ရက်က ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမြန်မာစာ ဖြေဆိုပြီးသည့်နေ့မှစတင်ပြီး ပညာ ရေးလောကသားများသည် အဆိုပါ အကောင့်ကို စောင့်ကြည့်နေပြီး ယင်း အကောင့်ပိုင်ရှင်မှာ ပြင်ပဘော်ဒါ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဟု ပြောဆိုနေမှုများလည်း ရှိနေ သည်။
မျက်နှာ အသိအမှတ်ပြုစနစ်ပါရှိသော နေကာမျက်မှန်များ အသုံးပြူမည့် အစီအစဉ်ကို တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ စ
ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀ဝ ခန့်က ကျင်းပခဲ့သည့် ရိုးရာလှေပြိုင်ပွဲကို ယခုအခါ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ချင်းတ??
မြန်မာ- ထိုင်း- လာအိုနယ်စပ် လေထုညစ်ညမ်းမှု အညွှန်းကိန်း အန္တရာယ်အဆင့်မှ ကျဆင်းလာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော်က အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဥပဒေမူကြမ်း သဘောတူထောက်ခံ
တောတွင်းသို့ ဟင်းစားရှာထွက်နေသူအချို့ မိုင်းထိမှန်၊ သက်ဆိုင်ရာမှ ရှင်းလင်းပေးစေလိုဟု ဒေသ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ (၁ဝ၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အဖြစ် သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ အား အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူ၍ နိဗ္ဗ?